PICS: Abandoned gold mines a 'deadly panacea' for Zimbabwe's jobless - Worldnews.com
PICS: Abandoned gold mines a 'deadly panacea' for Zimbabwe's jobless
It is the same place where 26 artisanal gold miners perished underground when a dam upstream burst its walls and flooded tunnels. The tragedy occurred
"At first, my husband did not want to go there, but later on, he changed his mind saying he wanted to see his friend. Later that day, news filtered that the mines had been flooded,"
Abandoned gold mines a 'deadly panacea' for Zimbabwe's jobless
At a small mining community in Battlefields near Kadoma, about 157 km south west of the capital, jobless people sit under trees to escape the burning sun. It is the same...
Mining Weekly 2019-05-10
HARARE, May 23 (Reuters) - Zimbabwe has awarded a concession to explore for and mine platinum to a company linked to a Nigerian billionaire as the country speeds up...
Zimbabwe Central Bank scraps subsidized exchange rates for fuel importation to help curb illegal arbitrage
HARARE Zimbabwe (Xinhua) -- The oil companies had continued to use the subsidized exchange rate after the RBZ introduced the interbank foreign exchange market in February...
HARARE, May 22 (Reuters) - Zimbabwe's mining sector was subdued in the first quarter due to a severe dollar crunch that affected production, with gold the most hit, the mining chamber said, adding some bullion miners had experienced recently introduced power cuts. Mining generates most of the export earnings for the southern African nation, which faces a severe shortage of...
Harare — Zimbabwe has started rolling power cuts lasting up to eight hours that will also hit mines, a schedule from the state power utility showed on Monday, after reduced output at both the largest hydro plant and ageing coal-fired generators. The power cuts will add to mounting public anger against President Emmerson Mnangagwa’s government as Zimbabweans grapple with an...
Pro-government statements are the norm in Chinhoyi, the hometown of former president Robert Mugabe. But that was not the case at a public meeting Saturday, as Zimbabweans grappling with poverty amid the flailing economy are using every chance they can to voice to their anger. Doug Taylor Freeme, a former leader of the predominantly white Zimbabwe Commercial Farmers Union, was...
Harare/Johannesburg — When Emmerson Mnangagwa took over the leadership of Zimbabwe from Robert Mugabe in November 2017, he promised to revive the moribund economy and adopted a mantra he’s repeated regularly ever since: “Zimbabwe is open for business”. Mnangagwa, always wearing a scarf in the colours of the Zimbabwean flag, quickly set about traversing the globe to woo...